Wombat भन्छन्: "म एक राम्रो पनी प्यार गर्दछ", जुन 1Can2Can ले मेरो लागि एकदम सही खेल स्लट गर्दछ! हामी अष्ट्रेलियामा टकान्सन छैनौं, तर म सुनेको छु कि तिनीहरू रंगीन साइसिसेलीलिक कबूतर जस्तै।
वैसे पनि, यो जोडा फल-पागल चराहरू तपाईको विदेशी खेल साथीहरू हो त्यसैले उनीहरूलाई भेट्न अनुमति दिनुहोस् ... उनीहरूलाई एउटै जङ्गलमा फाँट लगाउँछन् जस्तो लाग्यो गोरिल्ला गो जंगली स्लट। एर, ह्याङ्ग गर्नाले, मेरो गर्भमा मस्तिष्कको कोशिकाहरूलाई मेरो बिस्तारै मलाई सूचित गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईं केवल मध्य अफ्रिकीमा गोरिल्लाहरू प्राप्त गर्नुहुन्छ, त्यसैले तिनीहरू हुन सक्दैनन्।
दक्षिण र केन्द्रको जंगलमा फेला पर्यो अमेरिका, टक्केन्स उनीहरूको भित्री भाडाको लागि चिनिन्छन् र तिनीहरूका भित्ताहरू (फल खाने) तरिकाहरू हुन्! र हाम्रो ट्युन्स कुनै अपवाद छैन। यो जोडा धेरै उदार हुन्छन्, खासकर जब तिनीहरू भोका हुन्छन्। वास्तवमा, तिनीहरूका बीमहरू स्वादिष्ट जुनून फल, पाइपयास, अनानास, अनार र किभिसमा डुब्न थप भन्दा बढी चाहन्छन्। त्यसोभए, तिनीहरूले चमक-रंगको नास्ताहरूसँग आफ्ना खुट्टाहरू भरेर, तपाईं आफ्नो कफी भर्न पाउनुहुनेछ!
तर अब खेलमा;5रिल्स र 25 वेतन-रेखाहरूसँग, यो NextGen स्लट (ती राम्रा व्यक्तिहरू पछि एलिस र रेड क्वीन स्लॉट) मोबाइल र ट्याब्लेट, साथसाथै डेस्कटपमा उपलब्ध छ, र सामान्य गेम मेकानिक्समा केहि विशेष वर्षा-वन ट्विस्टहरू छन्। यो एक रङ्ग पर्व हो, हामीले देखेको सबैभन्दा धेरै पटक छोटो स्लॉट डीजे जंगली स्लट।
हो, द 1 गर्न सक्छ2स्लटले परम्परागत फलफूल ल्याउँदछ र त्यसलाई माथि उल्टो पार्छ। रिले उष्णकटिबंधीय जंगलको रूखहरूमा उच्च छ, दुई विदेशी पक्षीहरू प्रत्येक पक्षमा उभिएका हुन्छन्। जबकि प्रतीक प्यारा स्लॉट्स, उज्ज्वल हरियो छेउ र विदेशी बाट बनाइन्छ फूल, साथ साथै उष्णकटिबंधीय फलको हरेक प्रकार कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईले पाउन्ड / $ / €2लाई पेनी स्पिन स्पिनको रूपमा खेल्न सक्नुहुन्छ र तपाइँसँग पनि प्ले लाइन छनौट गर्ने छनौट गर्न सक्नुहुन्छ - यो एक विम्बेट मनपर्छ एक लचीला विशेषता हो।
जंगली बोनस सुविधा
सामान्यतया, जंगली प्रतीकहरू खेलमा सबै अन्य प्रतीकहरूको लागि स्थानान्तरण (स्क्याटर बाहेक)। तर यस स्लॉटको बारेमा के फरक छ भनेर समय-समयमा, हाम्रो पंखित मित्रहरू 1 क्यान र2रिलिजमा पेक गर्न सक्नुहुन्छ र रसदार उष्णकटिबंधीय फललाई बढी जंगली प्रतीकहरूमा बदल्न ...
स्क्याटर बोनस सुविधा
तपाईंको स्पिन पछि, स्थायी रूपमा टक्कैन्स पिउने गर्दछ कहिलेकाँही कहिलेकाँही उनीहरुको पर्दाबाट तल झस्किन्छ र रिल्समा जंगली बट्टा स्कैटर थप्न सक्दछ। सूर्यास्तमा सिल्हाउन्ट पेडको लागि हेर्नुहोस्! तपाईंले सिर्जना गर्नुभएको कुनै पनि सम्भावित स्क्याटर जीत कुल शर्त द्वारा गुणा गरिनेछ। र यदि तपाईसँग3स्क्याटरहरू रिसेलहरूमा देखा पर्दा तपाईंले 10 निःशुल्क स्पिनहरूसँग खेल्न पाउनुहुनेछ!
र, बस अन्य खेलहरु जस्तै हामी मनपराउछौं केन्द्र न्यायालय स्लॉट, तपाइँ बोनस राउन्डमा निःशुल्क स्पिनहरू पुन: ट्रिगर गर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो मनपर्ने सुविधा हुनु पर्छ।
फल मुक्त खेल सुविधा
अब तपाईं आफ्नो 10 नि: शुल्क स्पिन पाउनुभयो, यो शर्म को एक सा छ कि बोनस राउन्ड मा कुनै गुणक छैन। तर एक पटक फेरि, यो टक्कैन्सको उद्धारमा छ किनभने तिनीहरू प्रायः आफ्नो पखेटा फैलन्छन् र3जंगली प्रतीकहरू एक वा बढी रिले सम्म जोड्न मद्दत गर्दछ - र यो पुन: ट्रिगर गर्न सकिन्छ। हरेय!
जब तपाईं सोच्नुभयो कि तपाईंले यो सबै देख्नुभयो भने, जहाँ बाट तपाईं जुवा सुविधा पाउनुहुनेछ। जब तपाईं हार्ट र क्लब बटनमा क्लिक गरेर जीत पाउनुहुन्छ सक्रिय गर्नुहोस्। त्यहाँ लाल वा कालोमा दाँया गरेर वा सही सूट उठाएर तपाईंको विन्निहरू डबल गर्न वा चौडाई गर्ने विकल्प छ। तर सावधान रहनुहोस्, गलत शर्त बनाउनुहोस् र तपाई सबै चीज गुमाउनुहुन्छ ...
मलाई केही कारणका लागि 1Can 2Can स्लॉट मनपर्छ। सुरु गर्ने हरु को लागि; खेल यसको जंगली प्रतीकहरु संग धेरै उदार छ, जीत को लागि अतिरिक्त संभावना को अर्थ। त्यसपछि त्यहाँ अन्तरक्रियात्मक स्पिन तत्व टुकान्ससँग छ, जुन मूल खेल अनुभवको लागि बनाइएको छ। तर सबै भन्दा राम्रो उष्णकटिबंधीय वर्षा जंगल सुन्तला पृष्ठभूमि शोर हो! आवाज माथि प्ले गर्नुहोस् ताकि तपाईं आराम र यो मजा र फ्रिटी स्लट खेलमा केहि समय टाढा गर्न सक्नुहुनेछ।
1 ले2गर्न सक्छ अपडेट गरिएको: जनवरी 24, 2019 लेखक: आमिर Berrey
1 1 ले2गर्न सक्छ
2.0.0.1 मालोक n मक्खी
2.0.0.2 मौन भाग्यो
2.0.0.4 Foxin जीत: फुटबल बुखार
2.0.0.5 ड्रैगन सम्राट
2.0.0.6 रहस्यमय रहस्य
2.0.0.84मौसमहरु